Le yibhegi epholileyo encinci kwaye iphatheka ngaphandle engenawo amanzi, enomthamo weetoti ezi-8 kunye nezinto ezingama-840D-TPU. Xa ufuna i-adventure emfutshane, iya kuba yeyona nto uyikhethayo.
Into No: I-BD-001-39
Ubungakanani: 8cans / 6L
Ingcaciso: 295 * 210 * 280mm
Umgangatho ophezulu we-840D-TPU izinto ezingangeni manzi zikuvumela ukuba ungabi naxhala xa udlala.
Umzimba odibeneyo awufaki mthwalo kwi-adventure, iya kuba ngumncedisi wakho ongcono kakhulu.
Amandla eenkonkxa ezi-8 ngokuqinisekileyo lolona khetho lufanelekileyo kuhambo lwakho losuku. Unokuzisa izinto ezininzi ngaphandle kokuba ngumthwalo kuwe.
Gcina ukutya kubanda
Ukutywina, ukuhlala ixesha elide, i-inshurensi
Imisebenzi eyahlukeneyo, ukusetyenziswa kwemiboniso emininzi
Ukulondolozwa kobushushu okusebenzayo kunokufikelela kwiiyure ezingama-72
Indawo yokusebenzela eyiNgcali
Iworkshop engenalo uthuli iqinisekisa ucoceko olupheleleyo. Bonke abasebenzi mabanxibe iimpahla zomsebenzi kunye nezembozo zezihlangu xa bengena kumasifundisane, kwaye balawule ngokungqongqo umgangatho weemveliso.
I-2.Iworkshop ehlanganisiweyo yemveliso, ukusuka kulungelelwaniso lwemveliso eluhlaza ukuya kuvavanyo lweemveliso ezigqityiweyo, igqityiwe ngokuzimeleyo yinkampani, ukuze inyathelo ngalinye lemveliso lilawulwe ngokungqongqo.
Iworkshop yokuvelisa efanelekileyo iyakwazi ukwamkela ii-odolo ezininzi, ngelixa iqinisekisa ukusebenza kunye nomgangatho.
Ngaba ufuna ukushiya i-adventure eyedwa? Okanye uthathe uhambo olufutshane kunye nabahlobo? Izinto ze-TPU ezingangenwa ngamanzi, iitoti ezi-8 zomthamo. I-BD-001-39 ibhegi epholileyo ilungele ukusetyenziswa komntu okanye iihambo ezimfutshane. I-BD-001-39 ibhegi epholileyo inokwenza i-adventure emfutshane. Le ngxowa ipholileyo incinci inokubonelela ngokusebenza kwengxowa enkulu epholileyo, ukugcina ukutya neziselo zakho zipholile kwaye zipholile. Uyilo lwebhanti yegxalaba lilungele ukusetyenziswa xa ubuncinci umgama wokuhamba ngexesha lohambo. Kukho isiphatho esinokuqhutywa.
Egqithileyo Ingxowa ebandayo epholileyo engenamanzi
Okulandelayo: Camping Ice kupholile okungangenwa
Ibhokisi epholileyo yengxowa
Ukupholisa okwenzelwe wena
I-Cooler Bag ephathekayo
Iindawo ezinika umdla kupholile Bag
Ukuphola okungangenwa ngamanzi
1L / 1.5L / 2L / 2.5L / 3L yangaphandle yokuGcina amanzi esinyini
Amanzi okusingqongileyo Isinye i-BPA echibini lamahala ...